Inani elikhulu izakhamuzi zethu nabo unyaka ngamunye ithunyelwa ezikhungweni eziningi zezempilo, ukuhlanganisa ukuphumula kanye nokwelashwa khona. Kuvame kakhulu ukukhetha kulaba bantu angawi zokungcebeleka impilo isiRashiya, nalabo ezitholakala kuleli zwe elingumakhelwane Belarus.
Kukhona zokungcebeleka eziningi ezahlukene, futhi zitholakala cishe zonke izifunda zezwe. Ngo Grodno, isibonelo, iyona "Neman" - impilo yokungcebeleka onguchwepheshe ibanga kahle esikhulu izifo kanye nokuhlinzeka eziphambili kakhulu ukwelashwa ubuchwepheshe.
Impilo - Belarus
Abaningi uzomangala: kungani bakithi ukhethe zokungcebeleka hhayi eRussia nakwamanye amazwe, ikakhulukazi Belarus? Impendulo yalo mbuzo ulula: ezweni elaliyiSoviet Union wanikeza zokwelashwa kakhulu eliphezulu, lapho ukubaluleka kwabo kakhulu.
Futhi nakuba Belarus ayinakho kolwandle, lapho ungaya ephulukisa usawoti emoyeni, kukhona uhlobo emangalisayo, okuyinto enomthelela kokubili ukusetha isimo, futhi nje hawu impilo yakhe nomdlandla wokuphila.
Amanani yokuhlala kanye nezinsizakalo ngabezempilo Belarusian zokungcebeleka impilo kuyokushiya umangele abaningi abantu bakithi. Ikhwalithi isevisi akazange ahlupheke, kodwa kunalokho iyaphendula ngezinye izikhathi ngisho nabaqashi abafuna okungaphezu kakhulu. Yiqiniso, zikhona ongakhetha ezibizayo yokuhlala, kodwa ezihlukahlukene atholakale zonke izingxenye zokulala labantu ukwenza wonke umuntu wazibuza ukuthi kazi yikuphi ncamashi ukukhetha sibhedlela.
Impilo resort Grodno
Grodno impilo yokungcebeleka "Neman-72" yasungulwa ngo 1972. Yakhiwa endaweni ezungezwe emahlathini kaphayini kanye namahlathi okuxubile. Indawo itholakala kwimfunda we River Neman, futhi ohlangothini olusentshonalanga the resort wezempilo eyakhelene emahlathini Augustow Ihlathi. Ngenxa yalesi emoyeni lapha iqukethe conifer Iphunga and kunomphumela ekwelapheni.
Green futhi landscaped resort endaweni kuhlanganisa izakhiwo eziningana zokuhlala, isakhiwo wezokwelapha kanye nezokuphatha kanye ehholo lokudlela club.
Iphrofayela Medical esesikhundleni baphendukela "Nieman" (Grodno), kuhlanganisa nokwelashwa kwezifo kohlelo endocrine, peripheral nervous system, kwegazi, umzimba kanye ukuphazamiseka kwemikhuba yokudla. Thola amasevisi ezempilo lapha can kokubili abadala kanye nezingane.
supply system iziguli kuhlanganisa ukudla emihlanu ngoba imenyu ngezifiso. Kukhona ukudla Ukudla kusekelwe indlela yokudla ehambisana nempilo eziningana, sengathi uhlezi ikhona njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile, uhlelo ngabanye umsoco iyawakha ngaye.
"Neman" - yokungcebeleka, okuyinto ulinde wangikhuthaza ukuba ngivakashele izakhamuzi yiliphi izwe unyaka wonke. Kuyinto isikhathi esikahle kakhulu lokufika: ungakwazi axazulule, kusukela nga-8 ekuseni ekuseni ngosuku lokuqala iphemithi, bese uya 8 ebusuku.
Thola ngokwakho resort
Impilo resort itholakala emaphethelweni emzini Grodno, amakhilomitha 1.5 nje kude, esiqeshini Grandichi. "Neman" - ezempilo, ikheli esiqondile kuphi Grodno - emgwaqweni sibhedlela, Isakhiwo 23.
Ungathola lapha esiteshini sesitimela ngenombolo ibhasi 10. Okuphuma kufanele kube esitobhini sebhasi ngokuthi "Inombolo esikoleni 2". Kusukela sebhasi ngenombolo trolley ibhasi 2, kufanele uthole esitobhini zokugcina bese ushintshela ibhasi eshiwo ngenhla.
Woza kuye ngokwakhe Grodno kwenzeke Minsk, ibanga lapho benqotshwa futhi ngendiza, ngesitimela futhi ngebhasi. Njengoba sinesithakazelo kwesikwenzayo edolobheni lapha izitimela, kanye namabhasi.
Nokho, kukhona njalo ukhetho ukuza ngqo uya khona emshinini wakho. Ngakho izindlela ngangokunokwenzeka ukuya Grodno kanye resort ngokwayo, kakhulu. Izivakashi zidinga kuphela ukukhetha esikahle kakhulu kubo.
Amagumbi futhi ngezilinganiselo "Neman-72"
Ezezindlu Isikhwama, alinikela izivakashi zayo endaweni yokungcebeleka "Neman" (Grodno), ibekwe emacaleni amathathu silele. esinezitezi ezintathu Bonke, zommbila kungukuthi enikeziwe kubo futhi kungukuthi oxhumene ukuhwebelana avaliwe.
Ngobungako amakamelo etholakala Kulezi zimo kuboniswa olulodwa, kabili futhi amakamelo amabili double. Ngayinye yalezi zici osinikeza ifenisha kunesidingo, i yokucela kagesi nge iqoqo izitsha, indlu yangasese ukhululekile eshaweni noma eshaweni, i-TV kanye amathawula.
Amakamelo ayisingili zitholakala kule izakhiwo at izinombolo 1 no 3. Inkonde ngayinye ifakwe umshini embhedeni owodwa, itafula elincane ngesitulo, lezingubo kanye etafuleni eliseceleni kombhede. Amakamelo 3 Corps LCD TV. Esikhathini kusuka ekuqaleni Januwari kuze kube sekupheleni kuka-May 2017 izinga salokhu lwekamelo umuntu ngamunye ruble 1770, kusukela ngo-June kuya ku-August 25 -. Ruble 1910, kusukela ngasekupheleni kuka-Agasti kuya ekupheleni kukaDisemba -. 1800 deda.
Igumbi Double etholakala ngayinye izakhiwo ezintathu. Bakuhlonyiselwe imibhede ezimbili elilodwa, isiqandisi nezinye izinto ezidingekayo ezisebusweni amakamelo olulodwa. Ngo № housings 1 no-2 lapho kukhona esihlalweni okulala isetshenziswa njengenhlangano Embhedeni owenezelwe. Ukufakwa Inani umuntu ngamunye kule igumbi: .. Kusukela ekuqaleni kuka-January kuya ekupheleni Meyi 1590 ruble, kusukela ngo-June kuya ku-August 25 - 1,740 ruble, kusukela ekupheleni kuka-August futhi ekupheleni kukaDisemba - ruble 1630.
-Amakamelo amabili zitholakala 1st nemabhuloki 3rd. Banezinhliziyo egumbini lokuphumula nge ekhoneni usofa bese kusofa, ikhofi netafula edeskini umsebenzi, umbophi ne emashalofini, lapho kukhona i-TV, esiqandisini nezihlalo. I lokulala has a embhedeni kabili, itafula sigqoka, eliseceleni kombhede amatafula kanye WaseTurkey. Omunye isivakashi ukuhlala ngayinye egumbini kuyodingeka bakhokhe kusukela ekuqaleni kuka-January kuya ekupheleni May ruble 1900, kusukela ngo-June kuya ku-August 25 - .. ruble 2030, kusukela ekupheleni kuka-August futhi ekupheleni kukaDisemba - ruble 1930.
Intengo kuhlanganisa ukudla kahlanu ngosuku kwi oyifunayo imenyu babelwe zokwelapha kanye nokusetshenziswa kwe-Wi-Fi, lapho itholakala kuphela kunjalo wesithathu.
Amasevisi ezempilo e sibhedlela
"Nieman" - sibhedlela, lapho ukuze ukwelashwa kanye nokuvimbela izifo ngenhla kabanzi ukwelashwa ezivamile. Lapha, iziguli ujabulele ukuhlala ezihlukahlukene zokugeza zokwelapha, uthole ukukhanya-izinqubo, ugesi nokushisa ukwelashwa, zonke izinhlobo ephefumula nokwelulekwa oksijini, izinhlobo ezahlukene massage. zokwelapha Unconventional esetshenziswa aromatherapy aerophytotherapy, color- futhi speleotherapy. Ochwepheshe eziyinkimbinkimbi sibhedlela uye wazakhela izinhlelo ezikhethekile ukwelapha izinkinga ezithize nesineke.
The yokungcebeleka has a imishini yesimanje kanye eliphezulu ultrasound, ngenxa okuyinto odokotela ukuxilongwa ephelele nenembile wonke umzimba isivakashi. Abahlukahlukene spa zokwelapha, efana umzimba ezisonga namabhati ekhethekile, kukhona ohlwini amasevisi anikezwa.
Lokho ukwelashwa kwaba injabulo eyayenziwa esibhedlela kukhona zonke izinhlobo zokuzijabulisa. Ngezinye isevisi yakho kukhona umtapo wezincwadi, indawo yokubhukuda encane, ezemidlalo kanye umdanso amahholo, umdanso phansi ngoba ehlobo, cinema, Kwanyatheliswa esitodlwaneni, amatafula kanye table tennis Awamarakhethi. Uhambo emzini futhi amakhonsathi abaculi bendawo.
ukuphumula Wonderful ukwelashwa Ngibonga abazali befundisa izingane zabo ukuba kulesi sibhedlela woza "Neman-72." Uphenyo nezivakashi ukuba zivakashe lapha abonisa ukuthi kukhona ebaleni lokudlala nazo zonke izinhlobo senhliziyo, amaslayidi futhi izindawo ezifanayo, kanye egumbini yezingane. On the ukudansa kusihlwa, futhi, ukuba eze izivakashi kancane futhi ngaleyo ndlela ubungazwa kahle. Futhi izingane ekamelweni lokudlela kukhona imenyu enezingane ezinezidingo ezikhethekile sika.
Izibuyekezo sibhedlela iziguli
bakithi, wayevame kulesi sibhedlela "Neman". Nokho, ku- ngale ndawo, zigcwele kokubili nakho okuhle nokubi.
A injabulo ekhethekile amaholide ndawo resort, lapho eziningi izihlahla zikaphayini zikhule. Amaze kanye nezenzakalo zamasiko, njengoba eyayenziwa esibhedlela ihlelwe cishe nsuku zonke okuthile okuthakazelisayo.
Kulaba minuses izivakashi uthi audibility ezinhle kakhulu emakamelweni nokudla hhayi kakhulu nhlobonhlobo. Ezinye ngikhononda futhi ayanele ukuze sihlinzeke izinhlelo zempilo noma ukungavumi nizenze ngenxa yokuntula isikhala kanye nabasebenzi.
Amahhotela e Voronezh: izithombe kanye nokubuyekeza
Indlela ukugcina izinkalankala esahlala ekhaya?
Linderhof Ezinhle. Castle SaseVersailles noma i-Alps?
Sheathing zamapulangwe. Ukusetshenziswa futhi izinhlobo impahla
Kanjani ukunikeza intombazane
Ilogo History. Ilogo "BMW", "Skoda", "Audi", "Toyota", "Adidas": Uyini umlando we
Indlela yokwenza iziqhumane e "Maynkraft"?
Tatyana Yakovenko: Biography, Filmography, actress sika ekuphileni (izithombe)
Ibhizinisi Owenza: ukuthuthukiswa Inani